Saraakiil Maraykan ah oo la kulmey madaxda Dowlad goboleedyada - Horseed Media • Somali News
September 16, 2020Somali News
Saraakiil Maraykan ah oo la kulmey madaxda Dowlad goboleedyada
Sida ay shaacisey Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho waxaa kulan gaar ah dhexmarey Madaxweynayaasha Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland iyo Safaaradda Maraykanka, sarkaalka u sareeya hawlgalada gaarka ah ee ciidamada ee Africa USSOCAF Maj. Gen. Anderson iyo kuxigeenka Hawlgalka AFRICOM.
Kulankan ayaa ku saabsanaa aminiga wadaaga xogta iyo la dagaalanka al-Shabaab.
Saraakiishan ayaa horey ula shirey Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shir ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Waxaa socda qorshe Maraykanku ku ballaarinaayo weeraradiisa dhanka cirka ah ee lala beegsanayo al-Shabaab, taas oo la gaarsiinayo bariga dalka Kenya, weeraddaas oo mararka qaarkood ay ku nafwaayaan dad shicib ah.
Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in Maraynkanku hoos u dhigaayo dhaqaalaha uu ku bixin jirey ciidamada Soomaaliya, sidoo kale waxay wararku sheegayaan in uu socdo qorshe lagu mideeynayo ciidamada sida gaarka ah u dhaqaalahooda u bixiyo Maraykanku.